DAAWO SAWIRO:- Gudoomiyaha Aqalka Sare oo kulan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Gudoomiyaha Aqalka Sare oo kulan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo
DAAWO SAWIRO:- Gudoomiyaha Aqalka Sare oo kulan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo
Hiiraan Xog, Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka SoomaaliyaCabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah Maamulka Jubbaland kula kulmay ururada bulshada rayidka ah.
Kullanka oo ka dhacay guriga martida Jubbaland ayaa waxaa ka soo qeyb galay Ganacsato, Dhalinyaro, Haween Aqoonyahano iyo xubno ka socday Jaamacadaha magaalada Kismaayo,waxaana muhiimada kulanka uu ahaa in ururada Bulshada rayidka Jubbaland aragtidooda ku biiriyaan sida xal looga gaari karo khilaafka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Jubbaland diyaar u tahay iney horseed ka noqoto nabada,Federaaleynta,dib u heshiisiinta iyo is cafinta.
Sidoo kale,Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay iney diyaar u yihiin iney qaataan tallooyinka guddoonka Aqalka sare,islamarkaana ay soo dhoweynayaan dadaalada lagu doonayo in la isugu soo dhoweeyo Dowladdaha xubnaha ka ah Federaalka iyo Dowladda dhexe.
Ugu danbeyntii,Guddoomiyaha Aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi C/llaahi oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay wax keliya ay raadinayaan iney tahay saddex arrin oo kala ah nabad,midnimo iyo Heshiis.
Wuxuuna Maamulka Jubbaland uga mahadceliyay soo dhoweynta dadaalada Xubnaha Aqalka sare iyo kalsoonida ay ka qabaansida xal looga gaari karo khilaafka jira.
AKHRISO:- Dowladda Shiinaha oo hanjabaad u jeedisay Canada